W/Macdanta oo shirkadaha Biyo soo saarka ka dalbatay inay ogolaansho ka haystaan wasaaradda | Somaliland.Org
Waxa lagu war galinayaa dhamaan hayadaha ka shaqeeya hawlaha biyaha in ay iska diiwaan geliyaan waaxda biyaha ee WMT& Biyaha. Haddaba waxaan ka codsanayaa dhamaan masuuliyiinta ay wareegtadani tooska ugu socoto iyo masuuliyiinta ogaysiinta ku lehba inay sidaa ula socdaan isla markaana gacan ku siiyaan Isuduwayaasha WMT& Biyaha si ay u gutaan waajibaad kooda. Isla markaana waxaan farayaa agaasinka waaxda biyaha in uu si dhaqso ah u diyaariyo dhamaan dhukumentiyada iyo ruqsadaha looga baahan yahay wareegtadan. Sidoo kale waxa Agaasimaha guud ee WMT& Biyaha la farayaa in uu hirgaliyo fulinta wareegtadan.”
Previous PostMaayarka Hargeysa oo ka qeyb galay shir si weyn loogu faaqiday nidaaminta Suuqa dhexe ee MagaaladdaNext PostHa’yada Ilaalinta Tayada oo ku dhawaaqday go’aamo Qorshe lagu xakamaynayo dawooyinka iyo shiidaalka	Blog